आफ्नो परिवारको लागि यी युवाले श्रीमतीलाई किन यस्तो भने ? सबैको मन रुवाउने अत्यन्तै मार्मिक भिडियो (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > आफ्नो परिवारको लागि यी युवाले श्रीमतीलाई किन यस्तो भने ? सबैको मन रुवाउने अत्यन्तै मार्मिक भिडियो (भिडियो हेर्नुस्)
admin January 5, 2021 भिडियो, मनोरञ्जन	0
झापा । नेपाली कमेडी तथा अन्य भिडियोको निर्माण आजकल धेरै बढेको देखिन्छ । बिभिन्न बिषयमा समाबेश गरि मानिसहरुलाई मनोरंजन दिनका लागि दिनानु दिन यस्ता भिडियोहरु निर्माण भैरहेका छन् । यो भिडियोमा एक प्रेमी र प्रेमिकाको बारेमा कथा तयार पारिएको छ। प्रेमिका र आफ्नो परिवार बीचको मायामा आधारित कथामा यो भिडियो निर्माण गरिएको छ।
मनोरन्जन तथा संदेशका लागि बनाइएको यो भिडियो नेपालका बिभिन्न ठाउमा छायांकन गरिएको हो । दर्शकलाइ भरपुर मनोरंजन दिने उदेश्यले निर्माण गरिएको भिडियोमा कार्यरत प्राबिधिक टिमहरु पूर्वका रहेका छन् ।
यस भिडियोमा समाजमा उत्पन्न भएका बिभिन्न बिकृतिहरुलाई ब्यंगात्मक तरिकाले प्रस्तुत गरेर त्यस्ता कार्यहरुलाई रोक्नपनि भूमिका खेलेको छ । समिर सुबेदी र पर्नामी पुस्पाको अभिनय रहेको यो भिडियोलाइ शिशिर बुढाथोकीले निर्देशन गरेका छन्, तल भिडियो हेर्नुहोला ।
डाक्टरको कारण आँखा र ड्राइभरको लापरवाहीले आफ्नी आमा गुमाएकि कोपिला तामाङको सरकारी जागिर र गायिका बन्ने इच्छा.. मन छुने मिठो स्वर, दर्दनाक कथा ! (भिडियो सहित)